Lisitra momba ny serivisy fiara - Victor Mochere
Fotoana famakiana: 6 mn novakiana
Raha mikasika ny fitazonana ny fiaranao mandeha soa aman-tsara sy mahomby, ny fikarakarana azy tsy tapaka dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azonao atao. Saingy na dia toa manahirana aza ny fahazoana tolotra, indrindra ho an'ireo mpamily vaovao izay tsy dia zatra amin'ny fananana fiara, dia tsy voatery ho izany. Nanangona torolàlana momba ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny serivisy fiara izahay. Ny serivisy fiara dia fanaraha-maso ara-pahasalamana miaraka amin'ny fikojakojana mahazatra ny fiaranao izay manombana ny zava-drehetra manomboka amin'ny haavon'ny ranon'ny moteranao ka hatramin'ny fahatapahan'ny fiaranao. Ny serivisy dia matetika ataon'ny mekanika ary ny lalina indrindra amin'izy ireo dia manodidina ny 50 na mihoatra ny fisavana rafitra sy singa, fanitsiana ary fanoloana kojakoja.
Nahoana aho no mila serivisy fiara?
Mitovy amin'ny fisavana fiaram-panjakana ve ny serivisy fiara?
Inona no tafiditra amin'ny serivisy fiara?
Karazana tolotra inona no tokony hofidiko?
Ohatrinona ny vidin'ny serivisy fiara feno?
Impiry aho no mila serivisy fiara?
Afaka manompo ny fiarako manokana ve aho?
Ny serivisy tsy tapaka dia midika fa ny fiaranao dia mandeha amin'ny fomba mahomby sy azo antoka araka izay tratra, ary ny serivisy voalamina tsy tapaka dia mety hiafara amin'ny fitahirizana vola anao amin'ny fotoana maharitra. Amin'ny alàlan'ny serivisy tsy tapaka dia mety hahita fahombiazana amin'ny solika ianao, fikarakarana tsara kokoa ary motera mandeha tsara kokoa, ary koa fiadanan-tsaina noho ny fahafantarana fa mandeha tsara ny fiaranao. Mampihena ihany koa ny mety ho fahapotehan'ny fiaranao na ao an-trano na eny amoron-dalana. Afaka manampy anao hialana amin'ny faktiora fanamboarana henjana ihany koa izany amin'ny alàlan'ny fametahana ireo olana mety hiteraka olana rehefa mandeha ny fotoana. Ny tantaran'ny serivisy feno ihany koa dia hanampy ny fiaranao hitazona ny sandan'ny tsena raha misafidy ny hamidy ianao. Ny fikarakarana fiara tsy tapaka dia azo antoka fa hanitatra ny fiainan'ny fiaranao ihany koa.
Tsia tsy izany. Maro amin’ireo mpitondra fiara no mihevitra fa tsy mila karakaraina ny fiarany satria vao lany tamin’ny fitsirihana fiara nomen’ny fanjakana azy io, saingy ny tena zava-misy dia samy hafa ny serivisy mahazatra sy ny fitsirihana fiaran’ny fanjakana ary zava-dehibe ny fanatanterahana azy roa ireo. Ny fisafoana fiaram-panjakana dia fisafoana isan-taona izay manamarina ny fiarovana sy ny fiantraikan'ny fiara iray amin'ny tontolo iainana ary saika fepetra ara-dalàna ho an'ny fiara rehetra eny amin'ny lalan'ny firenena iray. Na izany aza, raha ny fisavana fiaran'ny governemanta no manamarina ny fahamendrehan'ny fiara iray, dia tsy miditra lalina kokoa noho izany. Ny serivisy iray dia manao, ary hiantoka fa ny singa rehetra amin'ny fiaranao dia mandeha tsara sy mahomby araka izay tratra.
Ny tena tafiditra ao amin'ny serivisinao dia hibaiko betsaka amin'ny karazana fidinao, fa ny serivisy feno dia mety hisy fanoloana menaka sy sivana; fisavana ny ranon-javatra rehetra sy ny fisavana frein feno, miampy ny fanaraha-maso matetika amin'ireo singa fototra 50 mahery hafa ao anatin'izany ireo singa mifandraika amin'ny fiarovana. Ny serivisy feno kokoa (sy lafo) dia hanamarina sy hanolo ireo singa midadasika kokoa ary mety ahitana ny fiovan'ny fantson-tsetroka sy sivana manan-danja isan-karazany, ary koa ny fanamarinana ireo anton-javatra toy ny fampifanarahana ny kodiarana sy ny fampiatoana.
Ny haavon'ny serivisy dia tokony hitovy amin'ny kilaometatra isan-taona ka miankina amin'ny haavon'ny fampiasanao fiara izany.
Fikarakarana tsy tapaka
Rehefa mila soloina menaka sy sivana
Isaky ny 6 volana na 6,000 9,656 kilaometatra (XNUMX XNUMX km) (izay tonga aloha)
Isaky ny 12 volana na 12,000 19,312 kilaometatra (XNUMX XNUMX km) (izay tonga aloha)
Araka ny fandaharam-potoanan'ny serivisy mpanamboatra, jereo ny boky torolàlana momba ny fiaranao raha mila fanazavana
Manantena ny handoa eo anelanelan'ny $100 – $200 ho an'ny serivisy feno izay tokony ahitana menaka motera sy fanovana sivana; fisavana ny ranon-javatra rehetra sy ny fisavana frein feno, miampy ny fanaraha-maso matetika amin'ireo singa fototra 50 mahery hafa ao anatin'izany ireo singa mifandraika amin'ny fiarovana.
Ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia manoro hevitra ny hametraka ny fiaranao amin'ny serivisy iray farafahakeliny indray mandeha isan-taona, na isaky ny 12,000 kilaometatra (19,312 km), na inona na inona tonga aloha, fa izany dia miankina amin'ny fiaranao sy ny fomba fitondranao manokana. Ny fiara sasany koa dia miasa miaraka amin'ny halavirana lavitra eo anelanelan'ny serivisy amin'ny alàlan'ny fampiasana menaka avo lenta. Raha mikasa ny hivarotra ny fiaranao ianao, dia afaka manampy lanja ny tantaran'ny serivisy feno satria ny mpividy dia hatoky kokoa amin'izay hovidiny.
Mety ho lafo ny fananana fiara, ary raha mameno ny fifandanjanao amin'ny banky amin'ny tahotra ny eritreritra handoavana ny serivisy indray mandeha na indroa isan-taona, dia azonao atao ny mieritreritra ny hikarakara ny fiaranao. Mila manana fahatokisan-tena mendrika ianao eo ambanin'ny satroka, ary na manao izany ianao na mampiasa mekanika, dia ilaina ny karakaraina matetika ny fiaranao mba hitazonana ny tenanao sy ny mpampiasa lalana hafa ho azo antoka eny an-dalana ary hiantohana ny fampandehanana mahomby. ny fiaranao.
a. Mora ve ny mikarakara ny fiarako manokana?
Raha manana fahalalana ara-teknika mendrika ianao dia tokony ho afaka mamita serivisy fiara fototra amin'ny fitaovana sy fampahalalana mety. Raha lazaina izany dia tsy manoro hevitra izahay ny hanandranao ny fiaranao manokana raha tsy fantatrao tsara izay ataonao ary manana fitaovana sy fitaovana mety ianao. Betsaka ny mety ho diso raha misy olona tsy dia za-draharaha miezaka mikarakara ny fiara, manomboka amin'ny fahavakisan'ny kojakoja fiara ka hatramin'ny fandratrana tena.
b. Inona no fitaovana ilaiko amin'ny fanompoana ny fiarako manokana?
Raha ny momba ny fikarakarana ny fiaranao manokana dia tena ilaina ny manana fitaovana sy fitaovana mety mba hahazoana antoka fa manao izany ianao amin'ny fomba azo antoka fa raha tsy izany dia mety hampidi-doza ny fiaranao, ny tenanao ary ireo mpampiasa lalana hafa ianao. Ary koa ny andian-tsipìka fototra sy ny screwdrivers (sy ny voro-damba tranainy maro), ireto fitaovana ireto dia ahitana:
Socket set (anisan'izany ny socket fanalana ny plug)
Fiara jack & axle
Fanalana sivana menaka
Lovia fanariana menaka (na siny)
Raha te hanao serivisy fototra amin'ny fiaranao manokana ianao dia ireto ny fisavana singa tokony hataonao:
1. Fanovana solika
Atsangano ny fiaranao, sokafy ny plug ao amin'ny moteranao, ataovy azo antoka fa nesorinao ny saron-tsolika ary asio fitoeran-drano mety tsara ao ambaniny hanangonana ny menaka efa nampiasaina. Avy eo, esory ny sivana menaka miaraka amin'ny mpanala sivana menaka ary miandry ny menaka rehetra hivoaka. Rehefa vonona ianao dia apetraho eo amin'ny toerana mitovy ny sivana menaka vaovao, ary asio kely ny tombo-kase fingotra amin'ny menaka vaovao mba hanomezana tombo-kase matanjaka kokoa. Avereno amboarina ny tariby fandoroana, tadidio ny manolo na manavao ny fanasan-damba manodidina ny tady fandoroana voalohany.
Amin'ny farany, ampiasà fantson-drano mba handraraka tsikelikely ny menaka vaovao, jereo tsy tapaka ny dipstick mba hahazoana antoka fa tsy feno loatra ianao. Alefaso mandritra ny 10 minitra ny motera mba ahafahan'ny solika mivezivezy, dia jereo mba hahazoana antoka fa tsy mitete ny sivana solika sy ny sompitra. Aorian'ny famonoana ny motera ary mamela ny haavon'ny menaka hipetraka dia ampiasao ny dipstick mba hahazoana antoka fa ny menaka dia ambony indrindra. Raha manamboatra ny fiaranao manokana ianao, ny iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra handaminana dia ny menaka efa nampiasaina. Ny menaka maotera dia tokony havaozina aorian'ny fampiasana fa tsy mifangaro amin'ny akora hafa.
2. Tosidra/toetry ny kodiarana
Ny fanerena tsy mety amin'ny kodiarana dia mety hiteraka fahaverezan'ny fampandehanana, fahatapahan'ny kodiarana, faharatsian'ny lalana ary tsy fitoniana amin'ny fiara. Noho izany, ny fananana fanerena mety dia ampahany manan-danja amin'ny serivisy fototra. Jereo ny torolàlana momba ny fanerena pneu ataonay raha mila fanazavana fanampiny. Tokony hojerenao ihany koa ny toetry ny kodiaranao, hahazoana antoka fa tsy tonta loatra izy ireo ary mahafeno ny fepetra takian'ny lalàna ny halaliny.
3. Soloy ranon-drongony
Ankoatra ny fanovana ny menaka maotera, ny serivisy fototra dia tokony hanamarina ny haavon'ny fluid hafa rehetra ao anatin'ny fiara, anisan'izany ny fanasan-drivotra, ny ranon'ny frein, ny coolant amin'ny motera ary ny haavon'ny ranomandry. Raha misy toa ambany loatra dia fenoy. Izy io koa dia hanamarina ny fatran'ny anti-freeze anao.
4. Soloy ny fanilo
Ny mpanamboatra sasany dia manoro hevitra ny hanolo ny fantson-tsetroka isaky ny 30,000 km, saingy tadidio fa misy soso-kevitra hafa miankina amin'ny karazana motera na mpanamboatra, koa jereo ny boky momba ny serivisy ho an'ny fiaranao. Raha sahirana amin'ny fiaingana na mihovotrovotra be ny fiaranao, dia mety mila palitao vaovao aloha ianao. Esory aloha ny fitarihana HT alohan'ny hanesorana ny plugs, ataovy azo antoka fa manadio tsara ny faritra ianao. Apetraho eo amin'ny faladiany ireo plugs vaovao ary ampidino ao amin'ny banga, alohan'ny hanamafisana azy amin'ny tanana amin'ny voalohany arahin'ny fanenon'ny torque mankany amin'ny toerana mety.
5. Soloy sivana rivotra
Matetika ny iray amin'ireo fanamarinana tsotra kokoa azonao atao. Esory tsotra izao ny vata fampangatsiahana ary esory izany mba hampisehoana ny sivana rivotra maloto. Esory ny sivana rivotra efa nampiasaina ary soloy ilay madio vaovao, alohan'ny hamehezana indray ny boaty rivotra.
10 ambony indrindra mamoaka gazy karbonika (CO2) eran-tany 2022
Ahoana no hahatonga ny orinasanao ho azo antoka kokoa